Top List Bookmark Sites Sites 2017 ye SEO
Iwe unoda Kuvaka high quality High PR Social Bookmarking Backlinks. Zvakanyanya kuoma kuwana High PR Social Bookmarking Sites list 2017, Handizvo here? Wati wamboedza kutsvaga nzvimbo dzemahofisi here? Iye zvino hapana chikonzero chekuwana iyo rwandu nokuti ini ndakasika a high PR Social bookmarking websites list 2017 nokuda kwako pano.
Tsvaga runyoro rwakakwana ita zvinotevera mabhuku paITS Tech School. Iniwo ndinoda kukuudza nzira yekushanda uye kudikanwa kwemajw.org webusaiti webhupu. Iwe unogona kuumba high quality backlinksnokunyora pane izvi zvakanyorwa urongwa hwebhumarkmark sites 2017. Unofanira kutarisa izvi pakarepo kubvumirwa zvinyorwa for backlinks quick.
Chii chinonzi Social Bookmarking?
Mabhokimasi ndiyo nzira kana sarudzo inopiwa mumavhuraji akasiyana-siyana emakombiyuta edu ega, foni dzakanaka uye mahwendefa kuti achengetedze nzvimbo yakasanganiswa yepaiti iyo inogona kushandiswa zvakare kushandiswa mune ramangwana rekudzidza kana kutaurwa. Nenzira iyi the social bookmarking kushanda asi mabhukimeni aya ari paIndaneti anogona kuchengetwa mune imwe nzvimbo yehuwandu bookmarking website yekutaridzirwa. Nzvimbo yakanaka yehutano bookmarking sites ndeyokuti dzimwe nhengo dze webhupu yebhukaiti ino inogona kuona uye kugovera zvikwangwani zvako zvakachengetedzwa uye kushanyira peji imwe yewebhu kubva mabhuku ekuchengetedzwa kwako. Pane mhirizhonga yakakura paZimbabwe bookmarking sites uye ndicho chikonzero kune mikana yekuwana zvakananga kuendesa mberi kubva kune mawebsite.
Iwe Unofanirwa Kuve Wapedzisa upfumi wose pane imwe nzvimbo yehupenyu hwebhusikiti webhusaiti. Tanga kubva kune zita redu kune mamwe ose ezvesuzhinji, unofanira kuzadza imwe neimwe yekorofa. Ichakupa kukuvimbika kwakawedzerwa & kusvika kuhuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwemashoko.
Upvote & kufanana nemamwe mabhukimiti kuti uwane zvakafanana mukudzoka.
Edza kunyora tsanangudzo yakasiyana-siyana paunenge uchitumira bhukimeni muwebsite yakasiyana.
Sarudza chikamu chakanaka & shandisa webhusaiti yako mune zvakakodzera chikamu.
Ita matikiti akakodzera akaenzana neshoko rako.
Ngwarira nezve spam ads. Zvimwe zvekugarisa mabhuku mabhuku zvakachengetedza zvisungo zvakavanzika & mapups zvakakutungamirira kumapeji asingasviki nemapeji epa spam.
Nokukurumidza kurongedza kushandisa zvinyorwa zvinotevera pasi apa.
Iye zvino tave takaunganidza Social Bookmarking mawebhusayithi uye takagadzira runyoro rwakakwana Free Free PR PR Kutevera Social Bookmarking sites List.